Yiziphi izinhlobo ze-Deep Groove Ball eziveza imininingwane? - Rihoo Industry (Hongkong) Co., Limited
Yiziphi izinhlobo ze-Deep Groove Ball eziveza imininingwane?
1. I-deep groove ball bearings ene-dust cover I-Standard D-uhlobo lwe-groove ejulile ibhola le-Z-hlobo nohlobo lwe-2Z, uhlangothi olulodwa ngendwangu yothuli nguhlobo lweZ, kanti olunye uhlangothi ngendwangu yothuli luhlobo lwe-2Z.
Kunzima ukuyisebenzisa ukubhekwa ngothuli. Ngaphansi kwesimo sokuthi umgwaqo oqoshiwe we-oyileji ufakwe futhi isimo sokuhlola asiyingozi, ukukhiqizwa kugcwele ukufakelwa kwamagesi okungenani, okugqamile nokugcoba i-lithium grease. Inani le-grease ejojowe ekuthwaleni ngalunye ngokuvamile liphakathi kwekota eyodwa nengxenye yesithathu yesikhala esisebenzayo ekuthwaleni, kanti inani lamafutha lingakhuphuka noma liyehliswa ngokusho kwemfuneko yomsebenzisi. I-greased injected ngokuvamile iqinisekisa ukuthi ukukhiqiza kusebenza ku- -40 kuya ku- +120 ° C. Uma umsebenzisi enezidingo eziphakeme zokuthwala, ezinye izinto, amamaki amafutha angagcwaliswa ngokuvumelana nesimo. Izindleko ezinamafutha omhlaba zingasebenza kahle isikhathi eside emva kokugcwalisa amafutha, ngaphandle kwesidingo sokwengeza amafutha ngesikhathi sokusebenzisa.
Ukuthwala isembozo somhlabathi kusetshenziselwa ikakhulukazi ama-generator amancane naphakathi, kokubili kokuphela kwe-rotor yezimoto, izimoto, amataretha, ama-air conditioners, abalandeli, njll, kanye nezikhathi lapho umsindo wokudlidliza komsindo ngokukhethekile okudingekayo.
2, i-groove ball ibhola ngokufaka uphawu lokufaka uphawu Olujwayelekile uhlobo olujulile lwebhola elibhekene nokufaka uphawu lokufaka uphawu luhlobo luthintana nophawu olufaka uphawu lwe-RSR (uphawu olulodwa lwe-side), uhlobo lwe-2RSR (uphawu lwamahlangothi amabili) nohlobo olungaxhunywanga olufakelwe uphawu lwe-ZR (ohlangothini olulodwa uphawu), uhlobo lwe-2ZR (uphawu lwamahlangothi amabili).
Ukusebenza kokuthwala indandatho ye-seal kufana nalokho okuhambisana nesembozo somhlabathi. Umehluko wukuthi kukhona igebe elikhulu phakathi kwendwangu yothuli nesembozo sothuli esithwala indandatho yangaphakathi, futhi igebe eliphakathi komlomo wokugcizelela kanye nendandatho yangaphakathi ye-non-contact seal ethwele isincane, kanye ne-lip seal Ukuthinta uphawu lokuxhumana akukho igebe phakathi kwamasongo angaphakathi, umphumela wokugcizelela ulungile, kepha ukuqhuma kuyanda.
Uma kwenzeka izidingo zomsindo ophansi, izintambo ezincane ezisezingeni eliphansi zebhola ibhola ye-60 no-62 uchungechunge zisetshenziswa. Kungakhathaliseki ukuthi ibhethri evulekile, ukubhebhetheka ngamathambo noma izimpawu, umsindo ophansi nezidingo eziphansi zokudlidliza kungenziwa uma uyala. E-JB yaseChina (Standard Mechanical Industry Standard), izimiso ezivumelekile zokudlidliza zamagundane amathathu weVV, V2, neV3 zicacisiwe.
3, i-groove ibhola ebhekene ne-stop groove futhi igcina uhlobo olujwayelekile uhlobo lwe-groove ibhola elibhekene ne-groove egciniwe, ikhodi yangemuva N, ethwala i-groove nge-ring bearing ring bearing NR, ngaphezu kweZN, ZNR nezinye izinto ezihlukahlukene.
Ngaphandle komsebenzi webhola elijulile elibhekene nokubhekana nomthwalo omsakazo, i-groove yokugcina nokubheja kwendandatho yokugcina ingakwazi ukunciphisa ukuhamba kwe-axial yokuthwala, ukwenza kube lula isakhiwo se-axial sesihlalo sokuphatha futhi kuncishiswe ubukhulu be-axial.
Izindwangu ezine-groove egciniwe kanye ne-snap ring zivame ukusetshenziselwa izingxenye zokusebenza njengezimoto namatrakta lapho umthwalo we-axial awukhulu.
I-1, i-bearings evulekile ibhekisela kuma-bearings ngaphandle kokumboza okunamathiselwe.
2, ukulinganisa okulinganayo, amakhasimende angakhetha izinto ezahlukene, amamaki.
3, ukulinganisa okulandelayo yizilinganiso eziyisisekelo zokubheja ngokwezindinganiso zomhlaba wonke, uma ikhasimende inezidingo ezahlukene, singakwazi ukwenza ngokwezifiso.
4, ukuphathwa okufanayo kunekhodi ehlukene negama, sicela uqinisekise ubukhulu bokuthi udinga.
Ama-Cranes Omsebenzi Omningi Wokwakhiwa Kwamaphrojekthi Asebenzisa Amapulisi Akhawulezayo
Kuyini Ukubeletha Okungajwayelekile? Ukuchazwa Okungeyona Ejwayelekile Kuchazwe Kanjani?